स्वचालित उपयोग रिपोर्ट मार्फत सफलता Martech Zone
मेरो काममा, हामी प्रयोग गर्दछौं SalesForce हाम्रो ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन (CRM) उपकरणको रूपमा। सेल्सफोर्स एक ती अविश्वसनीय प्रणालीहरू मध्ये एक हो जसले वस्तुतः केहि गर्न सक्दछ, तर सामान्यतया केहि प्रयास चाहिन्छ त्यहाँ सम्म पुग्न।
मैले सेल्सफोर्स एडभान्सिcingको अनुभव गरेको उत्तम प्रयासहरूमध्ये एक भनेको सक्रिय ईमेल मार्केटि usage उपयोग रिपोर्टहरू हो जुन प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई मासिक आधारमा पठाइन्छ। रिपोर्टहरूले अनुप्रयोगका क्षेत्रहरूमा केही अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ जुन तिनीहरू पूर्ण रूपमा उपयोग गर्दै छन् साथ साथै अन्य क्षेत्रहरू जुन उनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्दछन्।
स्वचालित ईमेल रिपोर्ट sections खण्डहरूको साथ समाप्त हुन्छ:
जबकि यस मा ईमेल मार्केटिंग रणनीति शानदार छ, म प्रत्येक सेक्सन भित्र विवरण व्यावहारिकता वा कार्यान्वयन को सहजताको अभाव पाउन। तपाईले इ-मेलका प्रत्येक बिषयमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ थप सुविधा प्राप्त गर्न के फीचरले प्रस्ताव गर्दछ। अनुकूलन गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, मेरो ईमेल भित्र १ 15 सिफारिशहरू थिए। यी सिफारिसहरूको अधिकतर रमाईलो छ तर म ती मध्ये कुनै लागू गर्नमा मेरो नियन्त्रण छैन।
यो एक उत्तम ईमेल मार्केटिंग रणनीति हो जुन म सफ्टवेयरमा सबैलाई एक सेवा उद्योगको रूपमा लागू गर्न प्रोत्साहित गर्छु; यद्यपि, म निम्न सिफारिशहरू गर्दछु:
यो सरल राख्नुहोस्। म प्रत्येक सेक्सन को लागी एकल आईटम सिफारिश गर्दछु ... एक आईटम कार्यान्वयन गर्न, एक सुदृढीकरण गर्न, एक अनुकूलन गर्न, एक विस्तार गर्न।
व्यापार अवसर। प्रत्येक आईटमको साथ, म व्यापारको अवसर प्रदान गर्ने छु वा अर्को ग्राहकको केस स्टडीको प्रयोग गरीरहेको हुनेछ।
कसरी सुरू गर्ने। अब जब उनीहरूले तपाईको रूचिलाई चुम्न सकेका छन, केहि सम्पर्क सम्पर्क को लागी को लागी सहयोगको लागि पछ्याउनु तार्किक हुनेछ।
यस प्रकारको ईमेल मार्केटिंग रणनीतिलाई स्वचालित र कार्यान्वयन गरेर, तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूलाई सफलताको लागि उपकरणहरू प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। बदलामा, तपाईको सफ्टवेयरको सफल कार्यान्वयनले सुधार र प्रयोगको नतीजा ल्याउनेछ - अपसेल अवसरहरूका लागि उत्तम अवसर र ग्राहक बृद्धि बढेको। यदि तपाईंले स्वचालित रणनीति यस्तै कार्यान्वयन गर्नुभयो भने, मलाई जानकारी दिनुहोस्। म परिणामहरू सुन्न चाहन्छु!
यस पोष्टको लागि मेरो प्रेरणा चान्तेलेको थियो कम्पेन्डियम, जसले भर्खरै लागू गर्योaएक दिन सुझाव यसको ग्राहकहरु लाई अप्ट इन गर्न को लागी ईमेल गर्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, प्रयोगकर्ताहरू (वा पनि गैर-ग्राहकहरू) ट्विटरमा व्यवसाय ब्लगिंग को लागी दैनिक सुझावहरु रोज्न सक्छन्!
टैग: सामग्री एनालिटिक्सparse.lyसामाजिक रिपोर्टिंग
नोभेम्बर २०, २००। 30::2008 अपराह्न
मलाई अझै पनी याद छ कसरी हटमेलले १० बर्ष अघि ठूलो हिट बनायो। तिनीहरू प्रयोगकर्ताको ईमेलमा हस्ताक्षर लि use्क प्रयोग गर्दछ र विश्वभर फैलाउँदछन् जुन उनीहरूलाई छिटो उडान गर्दछ। मलाई निश्चित छ कि ईमेल मार्केटिंग एक राम्रो मार्केटिंग टेकनीक हो तर स्पाम बक्सलाई ह्यान्डल गर्ने थप प्रतिभा हुनेछ।
हामीले मेरो अन्तिम काममा सेल्सफोर्सको प्रयोग गर्‍यौं, र मलाई यकिन छ कि यदि राम्रोसँग सेट अप गरिएको छ भने यो उपयोगी हुन सक्छ, मैले प्रयोगकर्ता इन्टरफेसलाई सीमा रेखाको प्रयोग गर्न अयोग्य भएको पाए। त्योले भन्यो, मैले यो मार्केटिंगको लागि प्रयोग गरिरहेको थिइनँ, म यसलाई बिक्रीको लागि प्रयोग गर्दै थिएँ। केहि बिन्दुमा म सीआरएमको सोशल मीडियाको साथ एकीकृत भएको हेर्न चाहन्छु। यो व्यक्तिगत रूपमा मेरो लागि पूर्ण उपयोगी हुन्छ। डाटा केवल मेरो व्यक्तित्व होईन। म सम्बन्धहरूलाई प्राथमिकता दिन्छु।